ဗုဒ္ဓဘာသာကို ချစ်မြတ်နိုးသူများ ကူညီကြပါ | အိမ့်မှူးသော်
ကျွန်တော်ဒီပို့စ်လေးကို မရေးချင်ပေ့မယ်လည်းရေးလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မည်သည့် ဘာသာကိုမှ တိုက်ခိုက်ရေးသားထားခြင်းမရှိပါဘူး ။ ထို့အတွက် ကြောင့် မည်သည့်အကြောင်း ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အခုလို တိုက်ခိုက်စော်ကားနေခြင်းကို လွန်စွာပင် စက်ဆုပ်ရွံရှာမိပါသည်။ အားလုံးလည်းသိပြီးကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်စေတမန် ဆိုတဲ့ ဒီဘလော့ဟာ ပိုးစိုးပက်စက်ကို ရေးသားထားပါတယ်ဗျာ။ ဘလော့ကို hack ဖို့ဆိုတာကလည်း hacker လည်းမဟုတ်။ ဟုတ်လို့ကတော့ အဲလိုဘလော့စက္ကန့်တောင်ကြာမှာမဟုတ်ဘူး ။ နုပ်နုပ်စင်းပစ်ချင်တာဗျာ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တခြား ဘလော့ကနေ ဖတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်ဗျာ။ ဘယ်လိုလည်းဆိုတော့ သူက blacklist သဘောမျိုးပေါ့ဗျာ။ ပျက်မယ်မပျက်ဘူးကတော့ ကျွန်တော်လည်းသေချာမသိဘူး။ ဒါပေ့မယ့် Google က ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးထားတယ်ဆိုတော့ blacklist တင်တဲ့သူ များလာရင်တော့ အဲဒီဘလော့ဟာ အပိတ်ခံရဖို့ နီးပါတယ်။ အဲဒီတော့ကျွန်တော် စာဖတ်သူများကို အကူအညီတောင်းတာပါ။ လုပ်နည်းလေးကဒီလိုပါ။ အခုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ ဒီလင့် လေးကိုသွားလိုက်ပါ။ ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ဗျာ။ မိမိ အကောင့်နဲ့ ပတ်ဝက်စ် နဲ့ gmail ကို ၀င်လိုက်ပါ။
login ၀င်ပြီးတာနဲ့ Createanew removal request ဆိုတာလေးကို ကလစ်ပေးပါ။ Enter the URL ဆိုတဲ့ ကွက်လပ်မှာ ဒီဘလော့ (http://messengerforbuddhist.blogspot.com/) ကိုထည့်ပါ။ Continue ပေးပါ။ နောက်ကွက်လပ်တစ်ခုမှာ မိမိဖြစ်ချင်သောအကြောင်းအရာကိုရေးပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ remove this blog from google လို့ရေးထားပါတယ်။ ရေးပြီးရင် Remove cached version of this page ဆိုတာကိုကလစ်ပေးပါ။ ပြီးပါပြီ။ Request တောင်းတဲ့ သူများလေ အဲဒီဘလော့အဖျတ်ခံရဖို့ များပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ လူမျိုးများ ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြပါလို့ အနူးအညွှတ်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ အောက်မှာပုံလေးနဲ့ပြပေးထားပါတယ်။
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအ မှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသော မြန်မာလူမျိုးများသည် ကျွန်တော့်ရဲ့ပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီးရင် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ။
ချစ်စံအိမ် 8:44 PM
သူ့ ထိုက်နဲ့ သူ့ ကံသွားပါလေ့မယ်ကွယ်
mhuthaw 10:10 PM
သူ့ထိုက်နဲ့သူ့ကံလည်းဟုတ်ပါတယ်..ခုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ပစုပန်ကံကိုဖန်တီးပေးရအောင်..'အစ္စလာမ်sucks'လို့'Google' မှာရိုက်ထည့်ပြီး' Islam Sucks
islamsucks.wordpress.com/ - Cached
Thanks for dropping by Islam Sucks! Takea... အင်တာနက် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သည် အစ္စလာမ် .... အစ္စလာမ် ဟာ ဘာသာတရားတွေအားလုံးကို ...'ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆီမျှဝေပေးလိုက်ကြရအောင်ဗျာ..
်Firefox-File-Save page as မှာ download လုပ်ပြီး printer နဲ့ထုတ်ပါ..သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ..
A Bowflex property health club isagreat deal less
complicated to move and transport in case the want
need to at any time crop up.
Also visit my website: bowflex selecttech 552 dumbbells best price
So, you could be curious about why Terrell Owens selected resistance bands
as his main resource for creating his unbelievable strength, velocity and muscularity.
My web page bowflex selecttech 552 adjustable dumbbells
Adjustable dumbbells have camealong way along withalarge total of these modify weights with no trouble.
my web page: http://www.getfitnstrong.com/adjustable-dumbbells/3-great-adjustable-weights-affordable-prices
This is certainlyaterrific way to get into shape, so
do not pass up out on what it may do in your case!
Feel free to surf to my web blog Report abuse
With over fifty separate work outs in its repertoire, it covers
literally each and every muscle mass team inside the system.
Feel free to visit my blog ... http://www.getfitnstrong.com/
This could certainly actually kill your self confidence and discourage you
from going on any more dates.
The adjustable dumbbells that make it possible for pounds change because of
the switch ofadial normally come to be temperamental when
shifting the configurations if they are usually not overatotally flat surface area.
It really is simple to adjust by simply pushing within the devices tackle and
positioning it about the range you wish.
Havealook at my blog post ... dumbbell sets
Also, the actual Energy Rods in the Bowflex Final
two house come which hasalife time unlimited assure.
I want to haveaminute to assist you to know how this exceptional sound was reached in
order that you'll be able to recreate it at home, and ideally get some excellent strategies about new matters you can do with the amp and results.
Energy making exercise routines for your entire system gives youaton of age defying benefits.
You can get several diverse excess weight options for anyalot cheaper price than you'll in case you went out and bought each separate 1.
Havealook at my weblog ... http://www.getfitnstrong.com
Saya Gwa 6:24 PM
ကျု ပ် သွားလုပ်မယ်ဗျား ခုဘဲ လုပ်တာ ဟုတ်ခဲ့ရင် တတပ်တအားပေါ့
ဘေးထိုင် ပီး အငြိမ်စား ဝေဖန်ယုံနဲ့ ကျေနပ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး ခုဘဲ လုပ်မယ်..